Daawo: Gabar 8 jir aheyd oo lagu kufsaday kadibna lagu dilay duleedka Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Gabar 8 jir aheyd oo lagu kufsaday kadibna lagu dilay duleedka...
Daawo: Gabar 8 jir aheyd oo lagu kufsaday kadibna lagu dilay duleedka Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa war ka soo saaray nin la sheegay inuu kufsi iyo dil duleedka Muqdisho ugu geystay gabar 8 sano jir aheyd, kaas oo hatan ku jira gacanta hey’adaha ammaanka.
Afhayeenka Booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo shir jara’id ku qabtay xaruunta dambi baarista booliska ee CID-da, ayaa sheegay in baaritaano ay ku socdaan ninkaas.
Sidoo kale waxa uu sheegay in ninka la hayo uu qirtay dilka iyo kufsiga loo geystay gabadha yar, isla markaana dhawaan cadaaladda lasoo taagi doono.
Afhayeenka ayaa sheegay in ninkaas lagu magacaabo Bashiir Maxamed Qaasim, waxuuna falkaas ka dhacay deegaanka Calamada ee gobolka Shabeellada Hoose.
Dhacdada lagu dilay gabadhan oo saacadihii lasoo dhaafay si aad ah baraha bulshada loogu faafiyey ayaa noqotay mid laga argagaxay, waxayna gabadha yar aheyd Agoon.
Goortii la dilayey gabadha hooyadeed ayaa ka maqneed xaafadda, waxayna warbaahinta u sheegtay inay aaday deegaanka Ceelasha Biyaha, si ay dharka ugu soo dhaqdo cidaha, waxayna shaqadaas ku maarey jirtay noloshooda.
Hoos ka Daawo Afhayeen